jP Scissors - Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး - Japan Scissors
ပင်မစာမျက်နှာ / Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး / 1 ၏စာမျက်နှာ 9
Mina Matte Black Scissors Offset ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး Set
Mina ကပျကြေး $ 154.95 AUD $ 199.00 AUD
Mina Ash Black ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး Set
အများဆုံး ergonomics နှင့်အကြံပြုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ဆံညှပ်၏ရရှိနိုင်ပါ Offset လက်ကိုင်အမျိုးအစားပါ!
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများနေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ကြသောသဘာဝကြောင့်ဆံပင်ညှပ်သောကတ်ကြေးကပ်ထားခြင်းကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည် ထပ်ခါထပ်ခါ strain ထိခိုက်အနာတရရရှိမှု (RSI) အလုပ်ခွင်မှာ
လမ်းကြောင်း ချွတ်ယွင်း Scissor ကိုကိုင်တွယ်ခြင်း Ergonomics အလုပ်သဘာဝကျကျတပ်ဆင်ချုပ်ကိုင်ထားနှင့်အတူရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ပုံစံကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးကတ်ကြေးပေါ်တွင်ပါရှိသော offset လက်ကိုင်သည်သင်၏လက်ကိုခိုင်မြဲသော်လည်းသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ၎င်းသည်မသက်မသာဖြစ်သောလက်ကိုင်ကြောင့်တင်းမာမှုနှင့်တင်းမာမှုမရှိဘဲနာရီပေါင်းများစွာ ဆက်၍ ဆံပင်ဖြတ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအများစုသည်ဆံပင်ညှပ်သူများအားအထူးပြုလုပ်ထားသော offset ပုံစံကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဓိကအာရုံစိုက်ရာမှာဆံပင်အလှပြုပြင်သူသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သူအားအလုပ်ခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှကင်းလွတ်စေရန်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှုမှလာသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်သြစတြေးလျ၏အကြီးမားဆုံး Offset Ergonomic လက်ကိုင်များ။
အကောင်းဆုံး ergonomic ဆိုင်ရာ Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများတွင်ဤအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည် -
၁၅% မှ ၂၅% သည်လက်ကိုင်များ၌ကွေးနေသောကွေးများကိုပါ
ဆံပင်ညှပ်နေစဉ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင့်လက်ထဲသို့အလိုအလျောက်ကိုက်ညီသောအဆင်ပြေသော offset ဆုပ်ကိုင်
ခေတ်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များအတွက် Premium ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးထုတ်လုပ်ခြင်း
ပေါ့ပါးသောဂျာမန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်သံမဏိ၊ 440C၊ သံမဏိနှင့် VG10 သံမဏိ
offset ပုံစံသည်ကတ်ကြေးလက်ကိုင်သည်အနည်းငယ်မြင့်မားပြီးအခြားတစ်ခုနှင့်လည်းဝေးသည်။ ၎င်းသည်၎င်းအားဖြောင့်ဖြောင့်ခြင်း၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခံစားမှုလျော့နည်းစေပြီးကတ်ကြေးနှင့်ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ရင်းကျွန်ုပ်တို့၏လက်ပုံစံနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး offset ကတ်ကြေးတံဆိပ်များ၏စုဆောင်းမှုတွင် -
Yasaka Seiki Offset ညှပ်
Kamisori offset ညှပ်
Juntetsu Offset ကတ်ကြေး
Joewell Offset ကတ်ကြေး
Ichiro Offset ကတ်ကြေး
Mina Offset ကတ်ကြေး
Jaguar Solingen Offset ကတ်ကြေး
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော Offset Ergonomics ကိုရှာဖွေနေသောပညာရှင်များအတွက်ကြီးမားသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Offset လက်ကိုင်ရွေးချယ်မှုကို ၀ ယ်ပါ - offset လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းတွင်လက်ချောင်းကွင်းများသည်အချိုးအစားမကျဘဲ၊ လက်နှင့်လက်စွပ်နှစ်မျိုးလုံးသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မေးလာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌လက်ကိုင်ထားရှိခြင်းကပိုမိုပွင့်လင်းလက်အနေအထားနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေဘို့ခွင့်ပြုပါတယ် အောက်ပိုင်းလက်မောင်းနှင့်တံတောင်ဆစ်အနေအထား ဖြတ်တောက်တဲ့အခါ။
သင်ထပ်တလဲလဲ strain ဒဏ်ရာခံစားနေရလျှင် (RSI) သို့မဟုတ်အထွေထွေကြွက်သားပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ဤညှပ်တစ် ဦး မဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသောကိရိယာများဖြစ်သကဲ့သို့စောင့်ကြည့်ရမည်။ သူတို့ကဲ့သို့ကြီးမားသောကတ်ကြေးများ! လက်မရှိဘဲသတ္တုအတုံးများသာဖြစ်သည်။
နိဂုံး။ Ergonomic Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးရွေးချယ်နည်း
Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများတည်ရှိရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်း RSI နှင့်ဆက်စပ်သောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်ပွားသည့်အလုပ်၏သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်သည်ဆံပင်ညှပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူဖြစ်စေ၊ ဆံပင်ကတ်ကြေးမှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကသင့်အားထပ်ခါတလဲလဲ strain ဒဏ်ရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွင်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အလှပြင်ဆိုင်များနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်များအပြင်ဘက်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်အလှပြင်ဆရာများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အလုပ်ခွင်၌အဖြစ်များဆုံးဒဏ်ရာအမျိုးအစားများကိုတက်ကြွစွာလေ့လာဆန်းစစ်လျက်ရှိသည်။ လက်တံ၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်နှင့်ပခုံးများပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအဆုံးထိအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဒဏ်ရာများကိုကတ်ကြေးများမှအမြဲတမ်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် RSI ဒဏ်ရာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ergonomic ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို RSI မှကာကွယ်ရန်ပြည့်စုံသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော်မှန်ကန်သော ergonomic ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ပထမခြေလှမ်းမှာ offset ဆံပင်ကတ်ကြေးတစ်ချောင်းဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးပုံစံများအတွက်လမ်းညွှန် | ဤနေရာတွင် ScissorHub.com.au တွင်ဖတ်ပါ
လက်ကိုင်ကိရိယာများ၏ Ergonomic ဒီဇိုင်း | ဤနေရာတွင် OEG.Tandfonline.com တွင်ဖတ်ပါ
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကပ်အမျိုးအစားများ ဤနေရာတွင် JPscissors.com မှာဖတ်ပါ
Salon Ergonomic Scissors လမ်းညွှန်ရွေးချယ်ခြင်း ဤနေရာတွင် SalonScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
ဆံသားညှပ်သည်မှန်ကန်သောမှန်ကန်သောမှန်ကန်သောညှပ်အမျိုးအစားများကိုမည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။ ဤနေရာတွင် BarberScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
ထပ်တလဲလဲ strain ဒဏ်ရာ (RSI) | The Lancet, 2007 တွင်ဤတွင်ဖတ်ပါ
အလုပ်မှာထပ်တလဲလဲ strain ဒဏ်ရာ (RSI) | ကနေဒါသမားတော်များတွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက် Ergonomic ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များ | ဒီနေရာမှာအသုံးချ Ergonomics မှာဖတ်ပါ
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက် Ergonomic ကတ်ကြေး နိုင်ငံတကာစက်မှုဂျာနယ်တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ